DHAGEYSO: Khasaaraha ka dhashay dagaalkii Bacaadweyne oo kordhay & Wararkii ugu… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Khasaaraha ka dhashay dagaalkii Bacaadweyne oo kordhay & Wararkii ugu…
DHAGEYSO: Khasaaraha ka dhashay dagaalkii Bacaadweyne oo kordhay & Wararkii ugu…
Mudug (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug aya sheegaya, in uu sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal Jimcihii shalay Ururka Al-Shabaab iyo Dad shacab ah ku dhexmaray tuulada Shabeellow oo ku dhow deegaanka Bacaadweyne ee gobolkaasi.
Inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku dhinatay dagaalkaasi, iyadoo 8 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya, in xaaladda tuulada Shabeellow ay deggan tahay, halkaasi oo uu dagaal culus ku dhexmaray maleeshiyada Ururka Al-Shabaab iyo dad shacab ah.
Guddoomiyaha Bacaadweyne, Axmed Daahir Macallin Cabdullaahi oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay, in xaaladda ay hadda xasiloon tahay, balse uu jiro khasaaro badan.
Halka hoose ka dhageyso Wareysiga Guddoomiyaha Bacaadweyne:
Khasaaraha oo kordhay